Metro Istanbul Waxay Shaqaaleysiin doontaa 27 Shaqaalaha Naafada ah | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaMetro Istanbul Waxay Shaqaaleysiin doontaa 27 Shaqaale Naafada Ah
14 / 03 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
metro istanbul waxay shaqaaleysiinaysaa dadka naafada ah
Metro Istanbul waxay qaadan doontaa guud ahaan 15 shaqaalaha naafada ah, 7 injineer naafada ah, 5 shaqaalaha farsamada naafada ah iyo 27 shaqaalaha xafiiska naafada ah.
Marka la eego baaxadda xayeysiinta la daabacay, 3 jagooyin kala duwan ayaa la qaataa. Shaqaaleynta 5 Injineer naafonimo leh, qalinjabinta kuliyadaha injineernimada, curyaannimada, iyo askarta musharraxiinta looma baahna inay ku lug lahaadaan howlaha milatariga.
Marka la qorayo 7 shaqaale farsamo, shuruudaha ka qalinjabinta dugsiga sare ee xirfadda ama dugsiga sare ee farsamada, murashaxiinta ragga ahi waa inaysan ku xirnayn adeegga milatariga.
Waa lagama maarmaan in la noqdo dugsi sare ama jaamicad ka qalin jebisa oo sifiican loo isticmaalo barnaamijyada xafiiska kumbuyuutarka si loogu qoro 5 shaqaale xafiiska naafada ah.
Dhamaan shaqaaluhu waa inay degan yihiin Istanbul.
Xilliga kama dambeysta ah ee arjiga ayaa ah 5-ta Abriil. Codsiyada waxaa lagu heli doonaa tababbarka xirfadeed ee Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul. Musharixiinta ayaa kaliya soo gudbin doona warbixinta caafimaadka naafanimada inta lagu jiro arjiga. Musharaxiinta codsiyadooda la aqbalo wareysi lala yeelan doonaa.
Faahfaahin ku saabsan Kaadhka Isticmaalka Isticmaalka Naafada ee Iinta iyo Iskuxidhka ah
Waaxda Gaadiidka ee Adana waxay leedahay 13 saldhig metro oo loogu talagalay dhammaan kooxaha naafada ah…